खै नैतिक आधार ? प्रतिनिधिसभाले अब केपी ओलीको विकल्प खोज्छ’ (अन्तरवार्ता) - tilottamacitynews
खै नैतिक आधार ? प्रतिनिधिसभाले अब केपी ओलीको विकल्प खोज्छ’ (अन्तरवार्ता)
तिलोत्तमा सिटी - 2021 Mar 05 09:27 PM Tweet
तिलोत्तमा,फागुन २१, २०७७। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच अहिले संवाद टुटेको छ। नेकपा प्रचण्ड र ओली समूहमा विभाजित छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा औपचारिक रुपमा दुई समूहमा विभाजित भयो। तर, सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई बदर गरेपछि राजनीतिक परिदृष्य बदलिएको छ। अब अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् ओलीलाई बिदा गर्ने पक्षमा नेकपाको प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूह छ। यसमा नेपाली कांग्रेसले केही शर्त अघि सारेको छ। अबको रणनीति, सरकार गठनलगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसँग गरिएको अन्तरवार्ताः
साभार नेपाली पब्लिक